Maraykanka oo jawaabay diidmada S/land kaga baaqsatay martiqaadkii Washington.. | Somaliland.Org
June 27, 2009	Maraykanka oo jawaabay diidmada S/land kaga baaqsatay martiqaadkii Washington..Codsigoodu (Somaliland) wuxuu ka soo horjeedaa ujeedada laga lahaa dhegaysiga kulanka” “Si nabad loogu soo dabaali karo Soomaaliya waxay ku iman kartaa in la soo dhiso dawlad-gobolleedyo kale, si ay isugu yimaadaan talo guud, Dastuur ay ku heshiiyaana samaysta, dabadeedna…” M/weynaha Puntland
Siday faafisay Idaacadda Codka Maraykanka ee VOA, kulankaas oo uu guddoominayay Donald Payne waxa ka qaybgalay Madaxweynaha Maamul-gobolleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ahmed Weld Cabdalla, Wasiirka Difaaca Uganda Dr. Crispus Kiyonga iyo Ciid Bedel oo ah Danjire Ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay, kuwaasoo dhamaantoodba ka waramay xaalada dalka Soomaaliya. Ka hor inta aanay masuuliyiintaasi warbixintooda soo bandhigin, waxa golaha markhaati ahaan uga horhadlay Dr. Ted Dagne oo ku takhasusay arrimaha Afrika kana tirsan Xarunta Cilmi-baadhista ee Congress-ka iyo Dr. Peter Pham oo ah Professor Cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda James Madison, kuwaasoo faahfaahin ka bixiyay xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay,waxayna si gaar ah diirada u saareen dhibaatooyinka ka taagan kooxaha xag-jirka ah iyo tuhunka laga qabo in kooxda Al-Qaacida falal Argagixiso ka qorshaynayso gudaha dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddi-hoosaadka Arrimaha Dibadda ee Congress-ka Maraykanka Mr. Donald Payne, waxa uu mid aan la aqbali karin ku tilmaamay in Somaliland guddigaas si gaar ah ula hadasho, maadaama aanay rabin inay meel wada fadhiistaan dawladda Kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya iyo Maamul-gobolleedka Puntland. Hase ahaatee, Donald Payne waxa sheegay in codsigaasi yahay mid ka soo horjeeda ujeedada laga leeyahay dhegaysiga kulankaas oo dhan. Waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee laga lahaa kulankaasi tahay sidii masuuliyiinta Maraykanka looga wargelin lahaa xaalada Soomaaliya iyo sida loola tacaali karo mushkiladdaha ka taagan dalkaas. Isla markaana waxa uu masuuliyiinta kulankaa Washington ka qaybgalay uga mahadnaqay sida ay u ajiibeen martiqaadka uu guddigiisu u fidiyay.
Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ahmed Weld Cabdalla oo isna kulankaas ka hadlay, waxa uu ka waramay dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya oo labaatankii sannadood ee u dambeeyay colaado daba dheeraaday ka taagnaayeen. Isla markaana waxa uu bulshada Caalamka ugu baaqay inay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatooyinka deriska la ah. “Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin Nabad. Waxay La-hayste ku dhex noqdeen dalkooda, waana in laga saaraa,” ayuu yidhi Ahmed Ould Abdallah.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo kulankaa ka dib waraysi siiyay laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, waxa faahfaahin ka bixiyay sida uu Maamulkiisu u arko in lagaga bixi karo dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan.
“Waxa weeye; sida laga warhayo Puntland waxa lagu dhisay rabitaanka dadka deegaanka degeni inay dawlad gobolleed dhistaan, laakiin Soomaaliya ka mid noqonaya. Annagu waxaanu weligayo dabada ka riixaynay in dalka Soomaaliya uu isku raaci karo, si Nabad loogu soo dabaali karo inay qaabka nidaamka Federaalka ah isku raacaan, taasina waxay ku iman kartaa in la soo dhiso dawlad-gobolleedyo kale oo markaa dawlad-gobolleedyadaas kale isugu yimaadaan talo guud, Dastuur ay ku heshiiyaan samaystaan, dabadeedna dawladda Soomaaliyeed ee Qaran sidaa ku dhisanto. Markaa taas weeye annaga fikradayadu, si aanu jaangooyo ugu noqon karo Soomaaliya inteeda kale oo dhan.” Sidaa ayuu yidhi Mr. Faroole oo la waydiiyay waxyaabaha uu Maraykanka u bandhigay, si wax looga qabto dhibaatada Soomaaliya ka taagan. Mar la waydiiyay sida uu u arko farogelinta ay Soomaaliya ku hayaan dalalka deriska la ah, gaar ahaan Itoobiya oo uu khudbaddiisana si guud-mar ah ugaga hadlay, waxa uu ku jawaabay; “Farogelinta qofba si buu u yaqaanaaye, Anigu hadda wax farogelin ah oo Itoobiya siday uga baxday dalka waxka dambeeyay ma arko. Midda kale, siday hadda xaaladu tahay ee Xamar laga sheegayo, iyagaaba (dawladda Shariif) codsaday in cidi u timaado oo soo farogeliso, laakiin annaga dhinacayaga waxba maanu codsan, mana arko wax fara-gelin ah oo hadda muuqda oo dhinacaa (Itoobiya) ka yimi.”
Danjire Ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Mr. Ciid Bedel, kana mid ahaa ka qaybgalayaasha shirkaas oo la waydiiyay Hubka la sheegay in dhowaan dawladda Maraykanku siisay dawladda Sh. Shariif Sh. Axmed, waxa uu yidhi, “Walaahi, siday Idaacadduhu sheegeen iyagay u taalaa. Laakiin, waxaan idiin sheegayaa in Aniga iyo Wasiirkayga Arrimaha Dibaddu aanu muddo badan halkan (Washington) ku soo noqnoqonaynay intii hadda ay dagaaladu Xamar ka bilaabmeen, dawladda Maraykankuna si fiican noo soo dhawaysay, taageero hiil iyo hooba ahna ay siisay dawladda. Taageeradu siday tahay iyo siday u dhacdayna waa mid annaga iyo dawladda Maraykanka naga dhexaysa, laakiin waxaan idiin sheegaynaa in taageeradii Maraykanku inay Soomaaliya soo gaadhay, mid kale oo ku xigtana aanu rejaynayno. Maraykanku wuxuu si cad noogu sheegay in aanu ogolaan doonin in dawladda Sharciga ah ee Soomaaliya la inqilaabo, iyadoo la isticmaalayo mabda aanay dadka Soomaaliyeed shaqo ku lahayn.” Sidoo kale, mar la sii waydiiyay waxyaabaha ay dawladdiisa TFG ka rejaynayso inay ka soo baxaan dhegaysiga waxyaabihii kulankaas lagaga hadlay, waxa uu ku jawaabay;
“Annagu dawlad ahaan natiijada ugu muhiimsan ee aanu ka rabnay waxa weeye; in aanu bulshada Caalamka hordhigno qorshaha siyaasadeed iyo dib-u-heshiisiineed ee dawladda iyo go’aankii dawladda Soomaaliyeed qaadatay oo ah in lagu xaliyo khilaafka Soomaaliya si ay Nabaddi ku jirto oo aan la isku dayin in lagu xaliyo dagaal iyo in la keeno dalka Ciidamo Shisheeye oo ajanabi ah.”